समचार Archives - Page 117 of 187 - Saptakoshionline
छ महिनामै रित्तियो फार्मेसी, न औ षधि न जीवनजल
घो राही  । ‘पे न्टाप दिनुस् न ।’ ‘यहा छै न गे टमा जानुस् ।’ ‘पाच एमलको सिरिञ्ज नि ?’ ‘त्यो पनि छै न, गे टमै पाइन्छ ।’ राप्ती उपक्षे त्रीय अस् पतालको फार्मे सी कक्षमा बसे की एक युवतीले विरामीको पर्चामा ले खिएको औ षधिको नाम हे र्दै यस् तै जवाफ दिइरहनुभएको थियो  । फार्मे सीले गे टमा जानुस्् भने पछि औ षधिको पर्चा बो के की घो राही उपमहानगरपालिका–१२ की सरस् वती रो का गे टतर्फ लाग्नुभयो ...
स्वबियुको पहलमा एम .पी.ए को शुल्क घट्यो
काठमाडौं । त्रि.बि सभा तथा कार्यकारी परिसदको सचिबलायाले जन प्रशासन क्यामपसमा स्वबियुको पहलमा एम.पी.ए को शुल्क घटेको छ । त्रि.बि सभा तथा कार्यकारी परिसदको सचिबलायाले जन प्रशासन क्यामपसको स्वबियुको पहलमा स्नातकोत्तर मा बढाइएको परीक्षा सुल्क फीर्ता लिएको हो । प्रति सिमेस्टर प्रति बिद्यार्थी रु २५००० शूल्कलाई घटाएर १५००० बनाउने निर्णय गरेको छ । सम्पुर्ण मा फारम नया सुल्क अनुसार भर्न र पहिला भरिसके...
भोटराज राई उदयपुर । १४ वर्षसम्म भाडामा बसेको उदयपुर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय शुक्रबारदेखि आप्mनै भवनमा सरेको छ । १ करोड २२ लाख ६८ हजार २७५ लागतमा तीनतले भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि कार्यालय आप्mनै भवनमा सरेको हो । २०७३ साउनमा सम्झौता भई छ महिना म्याद थपसहित हाल निर्माण सम्पन्न भवनमा १४ कोठा रहेको र चारकोठा आवास बाहेक सबै कार्यालय प्रायोजनमा रहेको जनाइएको छ । एक समारोहकाबीच निर्वाचन आयोगका प्रमुख...
भोटराज राई उदयपुर । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले निर्बाचनको मिति तोक्ने धिकार संसदलाई दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । विगतको अभ्यासमा निर्बाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्बाचन आयोगलाई पनि नदिई सरकार आफैसंग भएकाले तारतम्य नमिलेको प्रतिक्रिया दिदै प्रमुख आयुक्त यादवले यस्तो विचार राख्नुभएको हो । संसदलाई अधिकार दिएमा परिस्थितिको अनुकुलतालाई हेरेर निर्वाचनको मिति तोक्न...
युवराज विष्ट भोजपुर । जिल्ला अदालत भोजपुरले कर्तव्य ज्यान मुद्धामा तीन जनालाई जन्म कैदको फैसला गरेको छ । अदालतले टेम्केमैयुङ गाउँपालिका वडा नं – ५ खावा चोलन्तीका स्थानिय ३१ वर्षीय भिमसेन राई, ३८ वर्षीय धर्मराज राई, र ३१ वर्षीय दिपेन्द्र राईलाई जन्म कैदको फैसला गरेको हो । जिल्ला न्याधीस हरीश्चन्द्र इङनामको एकल इजालसले सोहि स्थानका ३९ वर्षीय धनहर्क राईलाई कुटपीट गरि मारेको अभियोगमा मुलुकी ऐन ज्...
‘विना धितो ऋण कसैले दिँदैनन्’
इटहरी । इटहरीको सदा टोलकी लिलम सदाको घर फुसको थियो । जति टालेपनि वर्षैपिच्छे पानी चुहिन्थ्यो । हावा हुरीले पनि उडाउने डर हुन्थ्यो भने सर्प आदि किराको समेत त्रास रहिरहन्थ्यो । तर उनले हालसालै पक्की घर बनाएकीछिन् । उनको यो घर बनाउन आवासका लागि सरकारबाट दुई लाख २० हजार रुपैया पाइन् । घर बनाउनको लागि दुई लाख रुपैया मात्रले पुग्दैनथ्यो । उनको साथमा सुको थिएन । अब विकल्प ऋण मात्र बाँकी थियो । तर पत्या...
सामाजिक अन्तरघुलनमा ईंटा थप्दै इनरुवाका मेयर राजन मेहता
कृष्ण भट्टराई जुनेली/ इनरुवा सडक नाटकमा सुन्दर केटीको भुमिका ! जो कोही लोभिने सुडौल र सपाट शरीर । मेरिनाले निकैबेर नियालिन् र अचम्भित भईन् । पछि तिनै केटीको भूमिका खेल्नेसंग प्रेम विवाह गर्न पुगिन् । नाटकमा युवतीको भूमिकामा भएपनि युवतीको सृंगारभित्रको मान्छे वास्तवमा युवक थिए । तिनै अग्ला आकर्षक युवाको अभिनयबाट प्रभावित भएर नाटक प्रदर्शन गर्ने संस्थामा काम गर्न पुगेकी इनरुवा ३ की मेरिना श्रेष्...
सवारी दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि झापामा राडार गनको प्रयोग सुरु
सन्तोष न्यौपाने झापा । सवारी दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि झापामा ट्राफिक प्रहरीले राडार गनको प्रयोग सुरु गरेको छ । बढ्दो सवारी दुर्घटना नियन्त्रणका लागि पूर्व(पश्चिम राजमार्गमा राडार गन प्रयोगमा ल्याएको हो । सवारी दुर्घटना बढेसँगै चेकजाँचलाई तीव्रता दिएको ट्राफिक प्रहरीले राडार गनमार्फत सवारीको गति मापन गर्न थालेको हो । सडकमा गुड्ने सवारी साधनको गति मापनका लागि राडार गन प्रयोग गरिएको ट्राफिक प्रहरी...
बेलवारीको इमानसिंह चोकमा जातिय संग्रालय निर्माण सुरु
मोरगं । मोरगंको बेलवारी नगर पालिका ४ इमानसिंह चोक नजिकै नगरपालिकाको सहयोगमा जातिय संग्रालय निर्माण सुरु भएको छ । बेलवारी नगरपालिकाको सात लाख सहयोगमा जातिय ऐतिहासिक औजारहरुको संग्रहीत गर्ने गरी संग्रालय निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो । स्थानीय चन्द्रकला शिसुन्खेले करिव २० लाख रुपौया पर्ने एक कठ्ठा जग्गा संग्रालय निर्माणका लागि उपलव्ध गराएपछि दलित समुदायका ऐतिहासिक औजारहरु संग्रहीत गर्ने गरी निर्माण...
जोखिममा परेका महिला तथा किशोरीहरु लाईआत्मनिर्भता तालिम
इटहरी । इटहरी उपमहा नगर पालिका २० मा रहेको माईती नेपाल परामर्श तथा पुनस्थापना गृहले आयोजना गरेको आत्मनिर्भता सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको छ । बेचविखन तथा विभिन्न कारणले जोखिममा परेका महिला तथा किशोरीहरु लाई उद्धार गरी माईती नेपालले ६ महिने बिभिन्न उपयोगी तथा सिपमुलक तालिमको समापन, विदाई समारोह सम्पन्न गरेको हो । तालिममा सहभागीहरूलार्इ प्रमाणपत्र प्रदान गरी बिदाइ कार्यक्रम गरिएको माइती नेपाल प...
Previous 1 … 116 117 118 … 187 Next